EDV 2020 को नतिजा सार्वजनिक - LiveMandu
EDV 2020 को नतिजा सार्वजनिक
सन् 2020 को लागि EDV को नतिजा अन्ततः सार्वजनिक भएको छ । हरेक वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्थायी बसोवासका लागि आफ्नो देशमा प्रवेश दिने मौका प्राप्त गर्न DV (Diversity Immigrant Visa – विविधता आप्रवासी भिषा) कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ । विश्वभरका ५० हजार भन्दा बढी आप्रवासीहरू अमेरिकामा प्रवेश गर्ने एकमुष्ठ मौका हो EDV ।
नेपाल ति देशहरु मध्येको एक हो, जहाँ नेपाली DV कार्यक्रममा सहभागताका लागि आवेदन दिन सक्छन् । सन् 2020 को DV परिणाम आधिकारिक रुपमा केही बेर अघि सार्वजनिक भएको हो । EDV 2020 मा तपाईंको परिणाम हेर्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस्ःhttps://dvlottery.state.gov/
नतिजा कसरी हेर्ने?
क) जब तपाइँ माथिको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईले त्यसपछि खुल्ने आधिकारिक गृहपृष्ठमा तपाईंको EDV नतिजा जाँच गर्नको लागि निर्देशन प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
ख) सबभन्दा पहिले, तपाईंको दर्ता नम्बर राख्नुहोस् गर्नुहोस् (फारम भर्दा तपाईले प्राप्त गर्नुभएको दर्ता नं.)
ग) तपाईंको थर (अर्थात परिवार नाम) लेख्नुहोस्
घ) जन्मको वास्तविक मिति लेख्नुहोस्, जसलाई तपाईंले फारम भरेको समय उल्लेख गर्नुभएको छ ।
ङ) तपाईंको ई-मेल ठेगाना लेख्नुहोस् ।
च) तपाईको आफ्नो फोन नम्बर ।
छ) देश उल्लेख गर्नुहोस्, जहाँ अहिले तपाईं हुनुहुन्छ।
ज) त्यसपछि SUBMIT बटन क्लिक गर्नुहोस् । नजिता देखिनेछ ।
Tags: Diversity Immigrant Visadv lottery 2020dvlotterydvlottery.state.govedv 2020 resultनतिजा
यसवर्ष भारतको बोर्ड टप गरेका बिधार्थीको लक्ष्य के छ त?
एउटै श्लोकमा अटाएको रामायण
रमाजान वा रमादान
छैठौं राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाड २०१९ को दोश्रो चरणको नजिता सार्वजनिक: नाम सहित
जीवन सम्भव छ ! सोंच बदल्ने कृष्णको कथा
कश्मिरका मस्जिदहरुमा ४ महिनादेखिको शून्यता
यस्ता छन् पुदिनाका आश्चर्यजनक फाइदाहरू, हटाउँछ यी ७ स्वास्थ्य समस्या